Fampidinana: 6,883 alaina 920,192 fotoana.
X-Plane Kent Surrey Sussex Air Ambulance AW139 1.0. Ity dia fisotroan-toeran'i Ambulance Air Ambulance Kent Surrey ho an'ny X-Rotors AW139. Ny livery dia mifototra amin'ny tena angidimby (G-KSSC). Ny Air Ambulance Kent Surrey Sussex dia fikambanana iray manome serivisy fitsaboana vonjy taitra amin'ny alàlan'ny fanomezana fiara mpamonjy voina helikoptera manarona ireo faritany anglisy telo any Kent, Surrey ary Sussex izay tompoin'ny South East Coast Ambulance Service. Repained in Gimp. Nosoratan'i Paul Mort.
Anaran'ny fisie g-kssc_kent_surrey_sussex_air_ambulance.zip
DCS Mampiseho ny WIP AH-64D-ny
Ny AH-64D dia afaka mampifanaraka andraikitra maro ao anatin'ny sehatry ny asa fanampiana ny rivotra akaiky. Ho fanampin'ny autocannon tarika tariby mirefy 30 mm M230 dia afaka mitondra fivarotana ivelany sy fitaovam-piadiana amin'ny pilotra elany. Ny fitaovana kasainay hapotsitra dia ny: Helmôna mifangaro amin'ny maso sy maso misimisy momba ny maso (IHADSS) Sensor Night Vision Sensor (MPNVS) maoderina Target Acquisition Designation Sight (MTADS) Night Vision Goggles (NVG) Armament ...
Ianareo izay efa niandry tamim-paharetana ny topy maso momba ny F28 ho an'ny P3D dia aza miandry intsony. Ireto misy sary vitsivitsy farany mampiseho ny fivoaran'ny modely mahafinaritra sy ny endriny. Ireo tifitra ireo sy ny maro hafa dia nampiana ho an'ny pejin'ny vokatra ka mendrika ny fitiliana amin'ny alàlan'ny fitifirana an-tsary etsy koa. Ny sidina fotsiny dia mientanentana hitondra anao karazany efatra amin'ny jet regional F28 Fellowship - ny 1000 ka hatramin'ny 4000. Nambara tamin'ny 1962, ny F28-1000 dia nanidina voalohany tamin'ny 1967 ary niditra an'habakabaka ...
Tongasoa eto Brisbane, any Queensland, Australia izay main-tany! Landmarks Brisbane City Pack dia fampidirana vaovao manaitaitra ny andiam-pivarotana Landmarks sy Cityscape ho an'ny Microsoft Flight Simulator, izay ahitana toerana mahazatra toa an'i Sydney, Singapore, London ary Paris. Iray amin'ireo toerana itodiana malaza indrindra any Aostralia ity tanànan'ny renirano ity noho ny toetrany mahatalanjona, ny fomba fiaina any ambanin'ny tany tropikaly, ary ny akaikin'ny toerana mafana fizahan-tany any Queensland. Ny fiverenana any Aostralia dia mbola tsy ...
Miorina amin'ny fanehoan-kevitra vao haingana avy amin'ny fiarahamonina momba ny olana momba ny flaps izay naseho tao amin'ny World Update III, dia nanapa-kevitra izahay fa hamaha ny olana haingana araka izay azonay atao ary hamoaka fanamafisana amin'ny herinandro ambony. Satria mila fitiliana tanteraka izany dia hanosika ny Sim Update III sy ny World Update IV isika mandritra ny herinandro. Sim Update III dia mikendry ny voalohan'ny volana martsa ary ny World Update IV dia mikendry ny volana aprily. Ankasitrahanay ny valin-teninao mitohy momba ny olana toa an'io rehefa miezaka ny manao izay mahitsy amin'ny fiarahamoninay izahay. Ny manaraka ...
Tapitra ny AIRAC Cycle 2102! Hamarino tsara fa ny daty navdata sy ny tabilao dia maharaka. Mpitsapa Beta MSFS 2020 - Azafady mba havaozy ao amin'ny AIRAC 2102 fanovana 1 amin'ny alàlan'ny serivisy fanavaozana MSFS 2020 Beta. Raha liana amin'ny fidirana amin'ny Beta ianao dia tsidiho azafady ny forum anay. Tsy fantatrao izay hanidinana amin'ity faran'ny herinandro ity? Norvezy dia manolotra sidina ririnina mahafinaritra sy sarotra. Ankafizo ny fijerena mahatalanjona midina eo alohan'ny tendrombohitra mankany Tromso (ENTC), na andramo ny fomba mihodinkodina mankany amin'ny làlambe 29 any Alta (ENAT) raha toa ianao ka ...
Faly izahay manolotra ny Hawk T1 / A Advanced Trainer ho an'ny Microsoft Flight Simulator. Hawk T1 / A Advanced Trainer for MSFS dia tafiditra ao anatin'ny sekolin'ny fampandrosoana ao amin'ny tranonkalantsika miaraka amin'ny fidirana diary fampivoarana voalohany. Miasa tsara ny dev, aza adino ny misoratra anarana amin'ny fampandrenesana mailaka amin'ny famotsorana! Manaraka ny fanampim-panazavana azon'ny miaramila nanampy tamin'ny Flight Simulator X, Prepar3D, X-Plane 11 ary Aerofly, ity simulasi feno antsipirian'ny Hawk ity dia novolavolain'i Just Flight's ...
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Indianapolis (IATA: IND, ICAO: KIND, FAA LID: IND). Seranam-piaramanidina iraisampirenena izay misy 11 kilaometatra atsimo andrefan'ny afovoan-tanànan'i Indianapolis any Marion County, Indiana, Etazonia. Izy io dia tompon'ny orinasa Indianapolis Airport. Ny drafitra nasionaly momba ny seranam-piaramanidina federaly (FAA) momba ny seranam-piaramanidina serivisy iraisana ho an'ny 2017–2021 dia nanasokajy azy io ho toy ny ivon-toerana fanaovana asa soa voalohany. Ahitana firafitra mihoatry ny tany ho an'ny fahitana sary ...
Vaovao eo amin'ny Scenery Gateway: Paris Charles de Gaulle (LFPG) vaovao! Seranam-piaramanidina Paris Charles de Gaulle, fantatra ihany koa amin'ny seranam-piaramanidina Roissy, no seranam-piaramanidina iraisam-pirenena lehibe indrindra any Frantsa ary iray amin'ireo seranam-piaramanidina be olona indrindra any Eropa. Nisokatra tamin'ny 1974, any Roissy-en-France, 23 km avaratra atsinanan'ny Paris izy io. Nomena ny anaran'ilay mpitondra fanjakana Charles de Gaulle. Tamin'ny taona 2019, ny seranam-piaramanidina dia nitantana mpandeha 76,150,007 sy hetsiky ny fiaramanidina 498,175, ka nahatonga azy io ho seranam-piaramanidina fahasivy be mpandeha indrindra sy eropeanina ...
Amin'ny Alatsinainy alina dia hanome iray hafa an'ny 777 izahay ho an'ny ekipa beta mba hijerena ireo fanovana madinidinika nataonay, ary ho azo antoka fa vonona ny hamoahana ny vokatra. Hanome azy ireo andro vitsivitsy miaraka amin'izy ireo isika alohan'ny hanosika antsika mivantana ny vokatra ary noho izany dia manavao ny torolàlana momba ny famoahana ho an'ny 25FEB mankany 27FEB aho. Ny vaovao tsara dia vita ny vokatra, ary mila fanitsiana madinidinika vitsivitsy fotsiny izay manamboatra endrika amin'ny endriny sy antontan-taratasy. Izahay dia...
Ny fanavaozam-baovao farany sy lehibe indrindra ho an'ny F-15 C, D, E & I Eagle ho an'ny MSFS dia napetraka amin'ny fananganana lehibe ankehitriny ary ny F-15 dia nihatsara be dia be niaraka tamin'ny endrika vaovao sy fanamboarana ny maodelin'ny sidina ary manana feon-kira vaovao tanteraka koa ianao izao. Ireo tompona amin'izao fotoana izao dia tokony ho nahazo mailaka momba ny fanovana sy ny torolàlana momba ny fomba hahazoana ilay fanavaozana, mba hanamafisana fa mandeha amin'ny kaontinao fotsiny ianao ary manavao, mametraka ary miala! SourceChangelog